အိမ်တွင်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို - walnut သိုလှောင်၏နည်းလမ်းတွေ, အာရဇ်သစ်သား, ပျားရည်
အိမ်တွင်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို - တန်ဖိုးရှိသောထုတ်ကုန်ကိုကယ်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
အိမ်တွင်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို - မေးခွန်းအများအပြားမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအကြီးအ walnuts ၏စပါးရိတ်ရာကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းသီဟိုဠ်သို့မဟုတ်ပျားရည်မှာကိုဝယ်နိုင်ပါလိမ့်ထွက်လှည့်ဖြစ်ပျက်များနှင့်မည်သို့အခွံမာသီးကိုစောင့်ရှောက်ရန်, အရာအားလုံးမသိရပါဘူး, နှင့်မှားယွင်းတဲ့သိုလှောင်မှုအခြေအနေများရှိလျှင်ထုတ်ကုန်ခါးသောဖွစျလာနိုငျသောကွောငျ့ဤအရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, မှိုများနှင့်ဖုံးလွှမ်း, ပြီးတော့သူကမသွားဘူး အစားအစာကိုသင့်လျော်။
မဆိုမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲပင်ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲပင်အသားအရေအတွက်အခွံမာသီး, နှင့်အိမ်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအိမျတှငျအခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ပုံကိုသိလိုလျှင်, ဘာအကောင်းဆုံးအခြေအနေများနှင့်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများတဲ့ parameters တွေကိုထုတ်ကုန်လွန်းလျင်မြန်စွာပြီးတော့မျှပြဿနာဆိုးရွားသေးပါဘူးကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အခွံမာသီးသိုလှောင်မှု pre-အပြောင်းအလဲနဲ့မီးဖို၌ထုတ်ကုန်၏ခြောက်သွေ့ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အစိုဓာတ်ကိုအငွေ့ပျံခြင်းနှင့်မှိုကြောက်မက်ဘွယ်သောမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ။
ဒါဟာပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အခွံမာသီးများအဘယ်သူမျှမ type ကိုမရနိုင်ကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အားလုံးကိုဘယ်လိုအိမ်ထဲတွင်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အံ့သြနေကြသည်, သင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာကြဘူးလျှင်တကယ်တော့, သင်မယ့်အစားအရသာအဆန်၏အခွံ၏အတွင်းပုံသှငျးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ကအသင့်လျော်ဆုံးသိုလှောင်မှုအခြေအနေများနေသောခေါင်းစဉ်:
အများဆုံးအကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုအခြေအနေများအခွံမာသီး - +10 မှ -5 ဒီဂရီများနှင့်စိုထိုင်းဆဟာအပူချိန် 40% ။
ဒါဟာသူတို့တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မဖြစ်သင့်တဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းအတွက်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ သာ. ကောင်း၏။
တိုင်း 1-2 လအတွင်းအခွံမာသီးမှို၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့အ check လုပ်ထားနှင့်ပျက်စီးပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်။
ခှံ walnuts တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို
သိုလှောင်မှုကို သန့် form မှာ walnuts shell ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့နေသမျှကာလပတ်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်လထဲမှာဒါမှမဟုတ် kernel ကိုထက်အနည်းငယ်ပိုခါးသောအရသာစတင်နိုငျသောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ဒီရှောင်ရှားရန်, သင်သည်အောက်တွင်တင်ဆက်အကြံပြုချက်များကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကွန်တိန်နာအတွင်း peeled အခွံမာသီးအေးမြသောနေရာတွင်ထားရှိလျှင်, သိုလှောင်မှုအချိန်ခြောက်လအထိတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
တစ်နှစ်မှတက်သောအဘို့ကို packages များအတွက်ထုပ်ပိုးသည့် kernel ကို, သိုလှောင်ရန်ရေခဲသေတ္တာ။
သိုလှောင်ခြင်း အိမ်တွင်ထင်းရှူးအခွံမာသီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခွံမာသီး shell ကို၌၎င်း, တစ်ဦးသန့် form မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ toasted အခွံမာသီး၏ပြည်နယ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရသာရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီပုံစံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့, ချက်ခြင်းဆိုးရွားကြသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။
အခွံမာသီးသိုလှောင်ခြင်းမပြုမီ, အခြောက်မှသေချာပါစေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စိုစွတ်သော zaplesneveyut ဒြပ်စင်။
shell ကိုအတွက်အခွံမာသီးကိုတက်မှ3လတစ်ဦးအေးမြကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်အိတ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ hazelnuts အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အခွံမာသီးများသိုလှောင်ရေး အိမ်တွင် hazelnuts ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ သူတို့အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အလွန်အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ စတိုးကနေသင်ယူဖို့ရှည်လျားငန်, လှော် hazelnuts - ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုသာကိုသဘာဝထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
hazelnuts ဒုတိယဦးစားပေးဂျနှင့်အတူသဘာဝကပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သိပ်သည်း Pouch လုပ်ထားတဲ့တံခါးပိတ်ရေယာဉ်များအတွက်တစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
shell ကိုအတွက် +3 +12 ဒီဂရီ hazelnuts ကနေအပူချိန်မှာတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးစားသုံးမှုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်မည်, အပူချိန်မှာ -0+3 ဒီဂရီ 2-3 နှစ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
မဟုတ်နိုင်အခွံမာသီးတခြားမျိုးနှင့်အတူ hazelnuts ထားပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဝယ် hazelnuts, ကလည်းရောနှောဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
10 ဒီဂရီအထိအပူချိန်မှာခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်တစ်ဦးအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းသန့်ထုတ်ကုန်ထက်ပိုမို3လထဲမှာသိမ်းထားတဲ့မရနိုင်ပါ။
ပျားရည်ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အရသာနှင့်အသုံးဝင်မှုများအတွက်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ပုံမှန်စားသုံးမှုဟာသွားတွေ, လက်သည်းများနှင့်ဆံပင်အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အိမ်တွင်အခွံမာသီးများသိုလှောင်ရေးသငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုကျနာလျှင်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သိုလှောင်မှုပမာဏပေါင်း 16-18 ဒီဂရီများအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်။
အခန်းဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ 70% ထက်မကျော်လွန်ရပေမည်။
လျှင်မြန်စွာ rancid ဖြစ်ပါတယ်အခန်းအပူချိန်မှာရိုးရှင်းပြီးအထုပ်ထဲမှာပျားရည်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. ။
လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. ပျားရည်ကအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖုံးနဲ့ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာထဲတွင်နေရာနှင့်မြေအောက်ခန်းသို့မဟုတ်အခြားခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင်ထားကြသည်။
ဘရာဇီးအခွံမာသီး - ပုံကိုသိမ်းထားဖို့?
ရေရှည်သိုလှောင်မှုကောင်းစွာရင့်ကျက်ထားတဲ့သူတို့သာအခွံမာသီး, ဘာသာရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုလှုပ်ခြင်း, အရေးပါ၏ဝိသေသညည်းသံကိုကြားရပါမည်။ ဒါပေမယ့်ပြဿနာကပြဿနာဖြစ်တယ်, သူတို့အဓိကအားဖြင့်တစ်သန့် form မှာရောင်းချ shell ကိုအတွက်အခွံမာသီးကိုဝယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်သိုလှောင်မှုများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်:
တစ်သန့်ပြည်နယ်အတွက်ခွံမာသီးသိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် 8 ဒီဂရီထက်မပိုသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါသိုလှောင်မှုနေရာအရပ်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့် damp ဖြစ်သင့်သည်။
အခွံမာသီး packages များထဲမှာသိမ်းထားတဲ့မဖြစ်သင့်ပါကထုတ်ကုန်အနံ့ကိုစုပ်ယူမထားဘူးနိုင်အောင်, lids နှင့်အတူကွန်တိန်နာမှာသူတို့ကိုနေရာချပေးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခွံမာသီး roasting ပြီးနောက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝကိုသိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ လှော်, ဆားသို့မဟုတ် sugary အခွံမာသီးမဟုတ်တော့3ပတ်ကထက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်အခွံမာသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို, ဒါကြောင့်သူတို့က, ဖြစ်နိုင်သမျှအာဟာရနှင့်အရသာရှိတဲ့နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်အသုံးဝင်သောရှိနေဆဲ - လူအတော်များများညားစိတ်ဝင်စားမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကို။ သူတို့ဝယ်ပြုပါလျှင်ချက်ချင်းမစား - မပြဿနာရဲ့, သင်ရုံစားပွဲပေါ်တစ်ဦးပန်းအိုးထဲမှာရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲအဘို့ချန်ခြွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခွံမာသီးတွေအများကြီးဝယ်ဖြစ်ပျက်ဆိုပါကစနစ်တကျသူတို့ကိုသိမ်းထားဖို့ဘယ်လောက်သိရန်လိုအပ်ပေသည်။
16-18 ဒီဂရီနှင့်တစ်ဦးအဖုံးနှင့်အတူအကြောင်းကို 75% walnut ကွန်တိန်နာ၏စိုထိုင်းဆများတဲ့အပူချိန်မှာတစ်လအထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
လေဟာနယ်-ထုပ်ပိုးသီဟိုဠ်6လအထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာအခွံမာသီးတစ်ပိတ်ထားသောအိုးတလုံးထဲမှာ3လအထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ walnuts ကိုစားလိုလျှင်, အခြောက်လှန်းအသီးနှင့်ပျားရည်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်နှင့်အရသာရှိတဲ့ဗီတာမင်ရောစပ်ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ အထဲတွင်အခွံမာသီးများအပြင်၎င်း၏သမ္မာသတိ, သင်ရက်စွဲများ, သင်္ဘောသဖန်းသီး, အခြောက်လှန်းချယ်ရီသီး, သံပုရာထားနိုင်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝရေခဲသေတ္တာထဲမှာဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအတူလိမ်ပုံစံလအတွင်းရောက်ရှိ walnuts ။
walnuts, သွေ့ခြောက် apricots, စပျစ်သီးပျဉ်, တံစဉ်များကို - 200 ဂရမ်;
ပျားရည် -3tbsp ။ ဇွန်း,
သံပုရာ - 1 pc ။
အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုဘောဇဉ် grinder ရှောက်သွားနေကြသည်။
ပျားရည် Add, ကောင်းစွာမွှေပေးပါ။
ချက်ပြုတ်နည်း Puff Puff မုန့်စိမ်း
တစ်ဦး omelette ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘယ်လိုအရသာ marinade ကြက်သား?
သင် puff barmy မုန့်စိမ်းကနေဘာစေနိုင်သနည်း
ကမာမှိုချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အရသာဟင်းလျာများချက်ပြုတ်၏9မူရင်းစိတ်ကူးများ
ခရစ်စမတ်ကွတ်ကီးများကို "Fusilli" - မူရင်းခဲဖွယ်စားဖွယ်
ကွာရှင်းမှုအတွက် 10 အကြောင်းရင်း - သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစား
လေ့ကျင့်ခန်းသိုင်းကြိုး - အကျိုးသက်ရောက်မှု
နေကြာ halvah - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Werner ရဲ့ syndrome ရောဂါ
ငါတို့အဘကို Save - ဓာတ်ပုံဆရာ: အရှိဆုံးပျော်စရာဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအမွှာ!
ခြေပေါ် Trophic အစာအိမ်နာ - ကုသမှု
Down syndrome ရောဂါနှင့်အတူကျောင်းသားများသည်ယဇ်ပလ္လင်မှဆရာကိုဦးဆောင်
Capsule ကော်ဖီ - ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့?
Apple ရဲ့ပွဲအပေါ်မင်္ဂလာဆောင် - အရိပ်လက္ခဏာ
ခိုင်မာတဲ့လက်ဖက်ရည် - ကောင်းသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်?
ကလေးများအတွက်ခွငျကောငျ - အိမ်မှာကုသမှု